Loo gaystay dhibaato | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Xuquuq iyo waajibaad / Loo gaystay dhibaato
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 4 7 2019
Waa mamnuuc in la isticmaalo dagaal, hanjabaad iyo in la dhaawaco dad kale. Qofka dagaalamaa wuxuu ku xad gudbay xuquuqda bani'aadamka oo galay dembi. Maaha qaladkaaga haddii laguu geystay dhibaato. Waxaad xaq u leedahay ilaalin iyo taageero.
Waa maxay dhibaato u geysasho?
Dhibaato u geysasho waxay ahaan kartaa arrimo badan. Waxay ahaan kartaa tusaale ahaan dhinac jir ahaan, maskax ahaan, galmo ahaan, dhaqaale ahaan ama maadi ahaan.
Dhowr tusaale waa haddii qof
qof kale wax ku dhufto, laado ama riixo
ku sheego wax xun oo kugu yiraahdo inaad wax xun tahay
kuu hanjabo oo kugu khasbo inaad samayso wax aanad doonayn inaad samayso ama kaa hor istaago inaad samayso wax aad doonaysid
doonayo inuu kantaroolo waxa aad samayso, tusaale ahaan mar kastaba fariin moobilka kuugu soo dirayo oo doonayo inuu ogaado waxa aad samaynayso iyo halka aad joogto. Eego moobilkaaga, Facebook-gaaga iyo Instagram-kaaga
kaala hadlayo galmo. Sawiro ama filim ka duubo adigoo aan ogolayn marka aad samaynaysaan galmo. Faafiyo sawiradaada adigoo bilaa dhar ah ama in galmo lagugla sameeyo adigoo aan doonayn. Kugu qasbo arrimo galmo oo kala duwan. Kufsi.
u taliyo dhaqaalahaaga iyo lacagtaada. Qaato kaarkaaga bangiga iyo lambarka sirta u ah.
jajabiyo alaabtaada, tusaale ahaan moobilkaaga
ku hanjabo dhaawicida ama dilida xayawaan aad rabaysatay.
Qofkee fuliya dhibaato?
Badanaaba waa rag kuwa isticmaala dhibaato. Xitaa ragaba dhibaato way soo gaartaa, badanaaba uga timi rag aanay garanayn meel ah banaanka guriga. Tani si kale ayay u eegtahay dhanka gabdhaha iyo haweenka taas oo dhibaatadu ka dhici karto banaanka guriga iyo gudaha guriga labadaba. Wax badan oo ka mid ah dhibaatada ragu u gaysto gabdhaha iyo haweenka waxay ka dhacdaa gudaha dadka xiriirka dhow lala leeyahay. Haweenaya waxaa dhibaato gudaha guriga ugu haysta qof ay garanayso oo ay ku tiirsantahay. Qofka samaynaya dhibaatadan badanaaba waa ninka ay xiriirka leeyihiin laakiin wuxuu xitaa ahaan karaa caruur, walaal ama xubnaha kale ee qoyska. Banaanka guriga gabdhaha iyo haweenka waxaa u iman karta dhibaato ah dhanka jinsiga ama kufsi ka yimi rag aan la garanayn.
Xukumid iyo kantaroolid
Dhacdooyinka dhibaatada dagaal waxay dhacaan marka qof doonayo inuu lahaado xukumida iyo kantaroolida qof kale. Qaramada Midoobay waxay ku qortay Bayaanka joojinta dagaalka ka dhanka ah haweenka in dagaalkani ay sabab u tahay sinaan la'aanta u dhaxaysa raga iyo haweenka. Sinaan la'aantan waxay tahay in ragu kaox ahaan haystaan awooda ah inay takooraan haweenka oo u gaystaan dhibaato. Dawlada Iswiidhan waxay hadafka sinaanta u dhaxaysa raga iyo haweenka ka dhigtay in dhibta ragu u gaystaan haweenka la joojiyo.
Dhibaatada ku salaysan sharaf dhawrida iyo cadaadiska
Dagaalka ku salaysan sharafta wuxuu ku jiheysanyahay qofkii jebiya caadooyinka qoyska ama qaraabada iyo dhaqamada. Tani waxay badanaaba dhib ku keentaa gabdhaha iyo haweenka, laakiin xitaa wiilasha way soo gaari kartaa dhib.
Dhibaadada ku salaysan sharafta iyo cadaadisku wuxuu ku saabsanyahay in la xadeeyo oo kantaroolid lagu sameeyo si loo ilaaliyo sharafta qoyska ama qaraabada, tusaale ahaan:
gabdhaha in aan loo ogolaan casharada qaarkood dhanka iskoolka
gabdhuhu ay toos u tagaan guriga ka dib iskoolka
gabdhaha aan loo ogolaan inay doortaan saaxiibadooda
wiilashu ilaaliyaan gabdhaha walaaladood dhanka banaanka guriga
haweenka dhalinyarada ah iyo ragu aan loo ogolaan inay keligood doortaan xiriiryadooda jacayl ama xiriiryada galmo
dadka dhalinyarada ah lagu qasbo inay guursadaan qof qoysku u doortay iyagoo aan doonayn
gabdhaha iyo haweenka xaq uma laha waxbarasho ama xaqa in la shaqeeyo.
Caadada ugu muhiimsan ee la xiriirtaa sharafta waxay ku saabsantahay jinsiga gabdhaha iyo haweenka. Caadadan waa in gabadhu ay ahaato bikrad marka la guursado iyo in iyadu aanay keligeed dooran qofka ay wada noolaanayaan. Qoyska iyo qaraabada ayaa waardiyeeya oo kantaroola iyada. Dagaalka iyo cadaadisku wuxuu xitaa dhib u keeni karaa wiilasha iyo raga jebiya caqiidooyinka qaraabada. Dadka jecel inay u galmoodaan dadka ay isku jinsiga yihiin iyo dadka aan isu arag inay jinsi ka tirsanyihiin si gaar ah ayay u dhibaataysanyihiin.
Qofka jebiya caadooyinka iyo caqiidooyinka qoyska waxaa lagu ciqaabi karaa in loo hanjabo, la garaaco iyo in laga hor istaago wada-jirka qoyska iyo qaraabada. Xaaladaha meel xun gaara waxay dhibtan keeni kartaa dhimasho. Go'aanka in qof la ciqaabo si wada-jir ah ayaa loogu gaaraa qoyska ama qaraabada oo waxaa fuliya raga iyo haweenka labadaba.
Guurka khasabka ah
Waxaad xaq u leedahay inaad go'aansato haddii aad doonaysid inaad guursato iyo qofka aad doonaysid inaad guursato.In qof lagu khasbo guur iyo qofka la guursanayo waxay mamnuuc ka tahay Iswiidhan. Qofka diyaariya ama qorsheeya in qof loo guuriyo qof kale waxaa lagu ciqaabi karaa xarig xabsi. Waxaa kale oo dembi ah in la qorsheeyo safar dalka dibediisa ah si qof loogu soo guuriyo qof joga dal kale.
Iswiidhan waxaa mamnuuc ka ah in la guursado qof caruur ah. Guur noocan ah oo lagu soo galay dalka dibediisa ma aha ansax gudaha Iswiidhan. Sida ku cad Qaramada Midoobay caruur waa 0-18 sano. Waxaad xaq u leedahay inaad hesho taageero iyo gabood. Waxay noqon kartaa tusaale ahaan in lala hadlo qof si loo helo talo-bixin iyo taageero, caawimaada in furniin la sameeyo ama hoyga gaboodka ah haddii xaaladu noqoto mid deg-deg ah.
Waxaad xaq u leedahay inaad u taliso jirkaaga iyo jinsigaaga. Gudniinku waa in qof jaro xubinta taranka ee gabadh ama haweenay. Iswiidhan waxaa mamnuuc ka ah gudniinka. Waxaa xitaa mamnuuc ah in lagu soo sameeyo dalka dibediisa haddii qofku deganyahay Iswiidhan.
Tusaale ah gudniinka waa marka qof jaro dhamaan ama qaybo ka mid ah kintirka iyo faruuryaha oo la isku tolo oo ay adkaato in, keento xanuun in la kaajo, marka caadada iyo in la sameeyo galmo.
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho daryeel caafimaad iyo taageero. Waxaa kale oo suurtagal ah in la sameeyo qalniin si dhibtani u yaraato.
Galmo lagu badasho lacag
Mamnuuc kama aha Iswiidhan in galmo la iibiyo, laakiin waa dembi in la iibsado galmo ama qof kale lagu khasbo galmo lagaga badalanayo lacag.
Galmo wax kale lagu badalanayo waa haddii aad galmo samayso ama dhacdooyin galmo ah samayso oo aad hesho wax laguugu badalo. Galmo waxay tusaale ahaan noqon kartaa
in qof la iska tuso kamarada intarnatka
la eego marka qof siigaysanayo ama qof kale hortiisa lagu siigaysto
qof kale lala sameeyo galmo ama dhacdooyin galmo ah
Waxa la helayaa maaha khasab inay ahaato lacag. Waxay xitaa ahaan kartaa moobil, dhar, sigaar, khamri, daroogo ama in la helo meel la seexdo.
Waxaa jira sababo badan in galmo lagu badasho wax la helo. Waxay ahaan kartaa in la helo lacag ama alaab. Waxay ahaan kartaa qofka la khiyaameeyay, la khasbay ama in loo dareemay wax fiican oo qofku u arko in ay tahay xaqiijin. Sharcigu wuxuu sheegayaa in haddii galmadu aanay ahayn mid la oggolyahay ay tahay sharci daro. Waxaad xaq u leedahay taageero haddii aanad wanaag dareemayn oo doonaysid inaad iska joojisid galmo wax kale lagu badasho.
Ka ganacsiga jirka iyo ganacsiga bani'aadamka ee ujeedadu tahay galmo
Mamnuuc kama aha Iswiidhan in qofku jirkiisa iibiyo, laakiin waa dembi in la iibsado galmo ama qof kale lagu khasbo ka ganacsiga jirkooda. Haddii qof kugu qasbo inaad galmo la samayso qof kale tani waxay ahaan kartaa ka ganacsiga dadka. Ka ganacsiga bani'aadamka waa gaadiid ku qaadida dadka oo habaysan si looga faa'iidaysto qaabab kala duwan. Laga yaabee in qof kaa caawiyay inaad timaado Iswiidhan oo ka dib lagugu qasbo dhilaysi si aad u bixiso lacagta safarkaas iyo amaahda. Waxaa kale oo ay ahaan kartaa inaad ku khasbantahay iibinta jirkaaga si aad isu masruufto naftaada iyo qof kale. Ka ganacsiga bani'aadamka ee ujeedadu tahay galmo waa dembi gudaha Iswiidhan. Ka ganacsiga bani'aadamka ee ujeedooyin kale xitaa iyana waa dembi, waxay ahaan kartaa in laisku khasbo tuugnimo, tuuksi, ka ganacsiga xubnaha jirka iyo waxyaabo badan.
Waxaad xaq u leedahay taageero iyo hoy gabood ah. Waxaad heli kartaa caawimaada inaad dib ugu noqoto dalkaaga.
Caruurta iyo dhalaanka ku nool dhibaato dagaal
Gudaha Iswiidhan sida waafaqsan sharciga waa mamnuuc in rabshad dagaal oo jir ahaan iyo maskax ahaan lagula kaco carruurta.
Waxaa xitaa sharci darro ah in lagu dhibo carruurta inay arkaan ama maqlaan dembi ka dhacay gudaha dad xiriir dhow leh. Carruur maaha inay u baahdaan inay arkaan ama maqlaan tusaale ahaan jir-dil, hanjabaad ama xadgudubyo galmo oo u dhaxeeya waalidka, walaalada ama qaraabada. Tani micnaheedu waa in rabshad dagaal oo dhex maraysa waalidka ay xitaa tahay rabshad dagaal oo lagula kacay ilmo. Dembigan waxaa lagu magacaaba dembiga nabad ka qaadista carruurta oo waxa ciqaabtiisu noqon kartaa xabsi. Carruurta markhaati u ahayd dembi ka dhacay gudaha dad xiriir dhow leh waa dhibbanayaal dembi oo waxay xaq u yeelan karaan magdhow.
Dhinaca xaalad ah dembiga nabad ka qaadista ilmo waxaa ilmuhu caawimaad ka helayaa sharci yaqaan ama garyaqaan kaas oo lagu magacaabo kalkaaliyaha qofka dhib loo geystay.
Cabsida iyo wel-welka dagaalku waxay raad toos ah ku yeelataa caafimaadka caruurta. Laakiin caruurta dhib dagaal ah ku arka guriga waxa xitaa xilli dambe oo nolosha ah ku dhici kara dhibaatooyin maskax ahaan iyo jir ahaan ah. Caruur badan waxaa ku adag inay ka hadlaan waxay arkeen oo sidaas darteed dhibta dagaalku way adkaataa in la fahmo. Maaha qayr caadi in caruurtu isku dayaan inay ilaaliyaan waalidkooda oo dembiga isa saaraan.
Waa muhiim in fiiro gaar ah loo yeesho caruurta ku nool dhibaato dagaal oo ka jirta guriga. Waxay u baahan karaan taageero gaar ah iyo caawimaad.
Qofka dhalinyarada ah waxay dhibaato dagaal ahi uga iman kartaa waalidka iyo walaalaha, iyo xitaa qof ay saaxiib yihiin. Waxay ku saabsanaan kartaa kantaroolida Facebook iyo Instagram, kalmado sharaf ridid ah iyo kufsi. Dhalinyaradu waxay u fahmi karaan in tani tahay dhibaato dhanka xiriirka ah oo aanay ahayn dhibaato dagaal ah.
Kooxaha sida gaarka ah u dhibaataysan
Kooxaha taageero diciif ah ku leh bulshada waxay badanaaba si dheeraad ah ugu nugulyihiin dhibaato dagaal marka loo eego kuwa kale Qofkan sida gaarka ah u nugul badanaaba wuxuu ku tiirsanyahay qof kale. Waxaa jiri kara fikrado cuqdad ah oo kooxdan laga qabo kuwaas oo raad ku yeesha nooca caawimaad iyo nooca taageero ee qofkani ka heli karo bulshada. Koox kastaba gudaheeda waxaa ka jira kala duwanaansho. Waa suurtagal in dhowr kooxood laga tirsanaado isla mar ahaantaas.
Haweenka waayeelka ah
Cudur, hoos u dhac awooda laxaadka ah iyo kelinimo waxay haweenayda waayeelka ah ka dhigtaa mid si dheeraad ah ugu tiirsan dadka kale. Muuqasho la'aan iyo ku tiirsanaan waxay keenta inay korodho khatarta loogu jiro dhibaato dagaal.
Dhibta dagaal waxay noqon kartaa noocyo kala duwan. Haweenay waayeel ah oo badan waxaa kale oo lagu dhibaa daryeelid la'aan. Waxay ahaan kartaa in aanay helin caawimaada inay is dhaqaan ama qaataan dawooyinkooda. Kuwan isticmaalaya dhibaatada dagaal waxay ahaan karaan shaqaalaha daryeelka dadka waayeelka ama qof qaraabo ah.
Haweenka leh balwad
Dhibta dagaalku waa arin ku badan nolosha maalinlaha ah ee haweenka sida xun u isticmaala khamriga ama daroogada. Iyaga waxaa badanaaba dhib u gaysta dad badan. Waxay ahaan karaan qofka ay saaxiibka yihiin, shaqaalaha xanaanada, booliiska iyo dadka kale ee balwada leh.
Haween badan oo balwad leh waxay aragti xun ka soo arkeen kulamada ay la soo yeesheen Hey'adaha dawladeed Tani waa sababta aanay u samayn askhato dacwad haddii loo gaysto dhibaato dagaal. Iyagu waxaa kale oo ay ka cabsadaan in caruurtooda lagala wareegi karo haddii balwadani soo shaac baxdo.
Haweenka leh hoos u dhac awooda laxaadka ah
Muuqasho la'aanta, ku tiirsanaanta dad kale iyo u nuglaan dheeraad ah waxay qofka leh hoos u dhac awooda laxaadka ah ka dhigtaa mid si gaar ah ugu dhibaataysan dagaal. Nugeylkani wuxuu u eekaan karaa siyaabo kala duwan taas oo ku xiran hoos u dhaca awooda laxaadka. Haweenaydan waxaa ku adkaan karta inay is difaacdo oo ka tagto xiriirkan dhibta dagaalka ah leh. Waxaa iyada ku adkaan karta inay sharaxdo waxa dhacay iyo qof dhagaysta oo rumeysta waxa ay sheegayso. Qaar badan waxay ku noolyihiin nolol ay bulshada ka dhex baxsanyihiin.
Haweenka asal ahaan ka soo jeeda dalal kale
Haweenka ay ku adagtahay luqada, ku nool iyagoo bulshada ka dhex baxsan oo aan lahayn shabakad xiriir oo ay liidato aqoontooda ku saabsan xuquuqdooda waxay u nuglaan karaan si aad ah. Xitaa dhaqaalo xumo iyo ku tiirsanaanta qofkan u gaysanaya dhibta waxay kordhisaa khatarta dhanka u nugeylka dhibta dagaalka.
Aqoonta liidata ee ku saabsan xuquuqda waxay keeni kartaa in haweenaydan aanay raadsan caawimaad. Waxaa kale oo jirta khatarta ah in dhibaatadan dagaalka ah lagu sharaxo inay ka mid tahay dhaqanka oo aan loo arkin dhib.
Ku xad-gudubka amaanka haweenka ee halista ah (4 cutubka. 4a § Sharciga dembiyada)
Waa dembi in qof kale loo gaysto dhibaato dagaal ah. Tani waxaa lagu magacaabaa ku xad-gudubka amaanka haweenka ee halista ah haddii nin uu dhibaato u gaysto haweenay ay leeyihiin xiriir dhow, ama ay soo lahaayeen xiriir dhow. Ku xad-gudubkani waa inuu dhacay marar badan oo dembigu waa xabsi. Booliisku waa inuu baaro dembigan xitaa haddii haweenaydan aanay doonayn.
Ku xad-gudub wuxuu ahaan karaa tusaale ahaan marka qof sameeyo dagaal ama la dagaalamo oo dhibo haweenaydan. Waxaa kale oo ay ahaan kartaa in haweenayda lagu khasbo inay samayso dhacdooyin galmo ah ama in ninku diido inuu ka tago guriga haweenayda.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sharciga ku xad-gudubka amaanka haweenka ee halista ah.
Dembi galmo ah (6 cutubka. Sharciga dembiyada)
Waa mamnuuc in galmo lala sameeyo qof aan oggolaan ama si cad u muujiyay in iyada ama isagu aanay doonayn inay kula sameeyaan galmo. Mar kastaba waa inay ahaato galmo aan ahayn khasab.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sharciga debiyada galmada.
Iibsiga adeegyo galmo (6 cutubka. 11 §)
Iswiidhan waxaa mamnuuc ka ah in la iibsado galmo. Qofka iibsada galmo waxaa lagu xukumayaa ganaax ama xabsi.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sharciga iibsiga adeegyo galmo.
Ka ganacsiga bani'aadamka (4 cutubka 1 a § Sharciga dembiyada)
Waa mamnuuc in la iibiyo ama la iibsado dadka. Waa ka ganacsi bani'aadam marka qof uu qof nugul ku khasbo dhilaysi ama ku shaqaynta lacag aad u yar amaba bilaa lacag. Dadka saboolka ah waxaa lagu qasbi karaa inay tuuksadaan ama dhiibaan xubnaha jirkooda.
Dadka loo gaystay dhibaato ah ka ganacsiga bani'aadamka waxaa dhici karta in la soo kaxeeyay dal ilaa dal kale. Badanaaba iyagoo aan muuqan ayay ku noolyihiin gudaha bulshada oo waxaa lagu kantaroolaa hanjabaad iyo dagaal. Ciqaabtu waa xabsi.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sharciga ka ganacsiga bani'aadamka.
Ku khasbida guur (4 cutubka 4 c § Sharciga dembiyada)
Waa dembi in qof lagu khasbo inay guursadaan iyadoo ka soo horjeeda qofkaas rabitaankiisa. Ciqaabtu waa xabsi.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sharciga ku khasbida guurka.
Marin habaabin u marida safar ah ku soo khasbid guur (4 cutubka 4 d § Sharciga dembiyada)
Waa mamnuuc in qof lagu khiyaameeyo in loo safro dalka dibediisa si qofkani halkaas loogu soo guuriyo iyagoon oggolayn. Ciqaabtu waa xabsi.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sharciga marin habaabin u marida safar ah ku soo khasbid guur.
Gudniinka (Sharciga1982:316 1 §)
Dhamaan dadku waxay xaq u leeyihiin jirkooda gaar ahaaneed. Iswiidhan waxaa mamnuuc ka ah in la jaro ama la dhaawaco qaybo ka mid ah xubinta taranka ee gabdhaha ama haweenka. Ciqaabtu waa xabsi.
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan sharciga gudniinka.
Miyaad garanaysaa qof u dhibaataysan dagaal loo gaysto? La xiriir:
Adeega arimaha bulshada
Adeega arimaha bulshada waxaa laga helaa degmooyinka oo dhan. Haddii laguu gaystay dhibaato dagaal ama aanad dareemayn wanaag waxaad caawimaad iyo taageero ka heli kartaa adeega arimaha bulshada.
Akhri dheeraad ku saabsan adeega arimaha bulshada.
Haddii aad tuhunsantahay in laguu gaystay dembi waxaad Booliiska kala xiriiri kartaa 114 14 Wac 112 haddii aad u baahantahay caawimaad deg-deg ah.
Wixi dheeraad ah ka akhriso bogga intarnatka ee Booliiska.
Caruurta xuquuqdooda dhanka bulshada, Bris
Bris waxay taageertaa caruurta ku jira xaalado nugul. Haddii aad ka yartahay 18 sano waxaad wici kartaa, e-mail u diri kartaa ama la sheekaysan kartaa Bris.
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee Bris.
Heeganka dadka dhib ka soo gaartay dembi, BOJ
BOJ waa urur ka shaqeeya in dhibanayaasha dembi soo gaaray helaan taageero. Waxaad wici kartaa telafoonkooda taageerida 116 006.
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee Heeganka dadka dhib ka soo gaartay dembi.
Arrimaha wiilasha (Killfrågor)
Arrimaha wiilasha waa bog intarnatka halkaas oo wiilashu iyagoo aan sheegin magacooda ay kaga sheekaysan karaan xiriiryadooda, galmada iyo jirka.
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee arrimaha wiilasha (Killfrågors webbplats).
Khadka deg-dega ee amaanka haweenka (Kvinnofridslinjen)
Haddii laguu gaystay dhibaato dagaal ama hanjabaad waxaad wici kartaa khadka taageerada dalka oo dhan ee telafoonka 020 – 50 50 50
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee Khadka deg-dega ee amaanka haweenka (Kvinnofridslinjens webbplats).
Heeganka haweenka iyo heeganka gabdhaha
Haddii laguu gaystay dhibaato dagaal una baahantahay inaad la hadasho qof ama aad u baahantahay hoy gabood ah waxaad la xiriiri kartaa heeganka haweenka iyo heeganka gabdhaha
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga Unizon.
Dheeraad ku saabsan Ururka qaran ee heeganka haweenka iyo gabdhaha Iswiidhan ka akhri bogga intarnatka ee (Roks).
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee Heeganka gabdhaha (Tjejjourens webbplats).
Qaabilaada Linna waxay bixisaa talo-bixin, taageero iyo gaboodka dhalinyarada loo gaystay dhibaato kantaroolid ah, hanjabaad iyo dhibaato dagaal oo kaga timi qoyska ama qaraabada. Telafoonka heeganka: 020 – 40 70 40
Dheeraad ku saabsan Qaabilaada Linna halkan ka akhri:
Haddii aad ku nooshahay dhaqan ku salaysan sharaf una baahantahay taageero iyo gabood waxaad wici kartaa telafoonka heeganka ee Terrafem looguna talogalay haweenka asal ahaan ajnabiga ah telafoonka 021 – 52 10 10.
Dheeraad ka akhri bogga intarnatka ee Terrafem (Terrafems webbplats)
Xuquuqda gabdhaha ee gudaha bulshada, TRIS
TRIS waa urur ka shaqeeya ka hortagida dhibaatada la xiriirta sharafta iyo cadaadiska. TRIS waxay leeyihiin telafoon heegan 0774 – 40 66 00. Iyagu waxay xitaa leeyihiin hoyga gaboodka ah.
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee TRIS.
1000 fursadood (1000möjligheter)
1000möjligheter waa bog intarnatka ah halkaas oo aad kaga sheekaysan kartid dhibaatada dagaal, galmo lagu baddasho wax kale iyo filimada matalaada galmada.
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee 1000möjligheter.
Hey'ada dawladeed ee dhibanayaasha dembi
Dhanka bogga jagvillveta.se waxaa ku jirta warbixin ku saabsan waxa ah dembi. Waxaa kale oo aad akhrin kartaa sida uu dareemi karo qofka loo gaystay dhibaato dembi ah iyohalka aad ka heli karto caawimaad. Boggan waxaa loogu talogalay adigaaga ah dhalinyarada.
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee jagvillveta.se.
Cadaadiska ku salaysan sharaf ilaalin
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan dhibaatada dagaal ee ku salaysan sharaf ilaalin iyo cadaadiska Ku saabsan guurka khasabka ah, gudniinka, dhibaatada ku salaysan sharaf ilaalinta la xiriirta dadka u hamooda kuwa ay isku jinsiga yihiin, dadka labada jinsiba u hamooda, dadka trans ah iyo xuquuqda dadka queer ah iyo dadka leh hoos u dhac awooda laxaadka ee caqliyan ah.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan cadaadiska ku salaysan sharaf ilaalinta.
Xarunta qaran ee amaanka haweenka, NCK
Kaydka aqoonta ee NCK waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan dhibaatada dagaalka ee dadka xiriirka dhow leh, ragga dhibaatadooda ka dhanka ah haweenka iyo dhibaatada loo gaysto kooxaha sida gaarka ah u nugul.
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee NCK.
RFSL waa urur ka shaqeeya xuquuqda dadka ah u hamooda kuwa ay isku jinsiga yihiin, dadka labada jinsiba u hamooda, dadka trans ah iyo dadka queer ah.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan RFSL.
Dhanka Youmo waxaad luqado kale ka akhrin karta kana daawan kartaa filimo ku saabsan xiriiryada, galmada iyo caafimaadka.
Wixi dheeraad ah ka akhri bogga intarnatka ee Youmo.